SOKA Soko G-2 Galeb FS2004
Soko G-2 Galeb dia fiaramanidina tafika Yugoslav. An add-on misintona tanteraka. Manonofy ho voafehy, tsara ny feo!
Ity fiaramanidina ity dia manaiky ny valin-teny rehetra. Henoy ny fofonain'ny mpanamory mifototra amin'ny loharanom-pitaovana nangatahina: izany dia vokatsoa ho an'ny dia! Masinina nofinofy mahafinaritra sy mora manidina. Azo alaina amin'ny repoblika 8. Aza mikorontana: rehefa manokatra izany add-on, zonao ny misoloky ny rivotra eny amin'ny saron-tava. Inona moa izany fa tsy maintsy atao, misaotra ireo mpanoratra ny asa nataon'izy ireo.
Ny Soko G-2 Galeb (anglisy: varevaka) dia tokana maotera, roa-seater fiaramanidina mandroso sy ny fahazavana mpampiofana tany-fanafihana fiaramanidina izay natao ny ATI sy vokarina avy Soko an'i Iogoslavia. G-2 Galeb no voalohany fiaramanidina fiaramanidina serial vokarina any Yogoslavia sy ny Balkans.
Downloads 8 828